OKANYE Imveliso yeFektri | China okanye iimveliso zabavelisi kunye nababoneleli
I-SMart-L40plus Izibane zoPhando ze-LED
Ngoyilo lweemodyuli zeelensi, iSMart-L ineziphumo ezingenasithunzi kwaye ihlangabezana neemfuno ezininzi zotyando. Umzimba wonke wokukhanya ulula kwaye ubume ngokuchanekileyo.
I-SMart-L35plus Izibane zoPhando ze-LED
I-SL-P40 Izibane zoPhando ze-LED
Ngoyilo lweentyatyambo, i-SL-P40, i-SL-P30 ekhokele ukukhanya kwezibane inokuphendula uninzi lwezidingo zotyando lwento eyomeleleyo nenobuchule.
I-SL-P30 Izibane zoPhando ze-LED
Itheyibhile ye-XHT-D ye-Electro-Hydraulic Operating Table
Itafile yokusebenza ebanzi, kunye nokuqhutywa kombane ngeentonga, unokuwanelisa amaziko ezonyango kwimfuno yamaxabiso ezinto, ingxolo ephantsi, ukusebenza kancinci nangokuzinza, ukuthembeka okuhle nozinzo.
Itheyibhile yokuSebenza ngombane ye-XHT-B
Itafile esebenzayo ye-Electro-Hydraulic Operation-H7000
Ngoyilo lwamalungu amahlanu, i-STable-H7000 ingaphendula uninzi lwezidingo zotyando. Yindleko ephezulu yokusebenza kwemveliso kwintengiso yeetafile.
I-SECure-U ICU yeNdawo yokuHlala iBhulorho
I-Bridge ye-Medical Hanging Bridge ibonelela ngeqonga elikhuselekileyo neliphezulu le-ICU, i-CCU, i-PICU, i-NICU njalo njalo kwi-SEcure-U yimodeli eyilelwe ngamalungu ahlukeneyo omileyo nawamanzi.
I-Secure-SJW Isithuba sokuhlinzwa
Ipendenti yonyango ixhaphakile kwigumbi lokusebenza, kwigumbi lokuhambisa kunye nakwigumbi lokuhambisa. Inika iqonga lokulayisha, umthombo womoya kunye nokunikezelwa kwamandla kwezixhobo zonyango ezinxulumene noko. I-SHINVA SEcure-SJW isendandatho sokuhlinzwa esenziwe ngoomatshini esingabodwa okanye esineengalo ezimbini sinikezela ngendawo ekhuselekileyo, ephezulu efanelekileyo necocekileyo yoogqirha nabongikazi.
I-SECure-H ICU yeNdlela yokuHlenga ibhulorho
I-Bridge ye-Medical Hanging Bridge ibonelela ngeqonga elikhuselekileyo neliphezulu le-ICU, i-CCU, i-PICU, i-NICU njalo njalo kwi-SEcure-H yimodeli eyilelwe ngamalungu adibeneyo nawomileyo.